Fizahantany Seychelles Optimista amin'ny hetsika ara-batana voalohany any UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Fizahantany Seychelles Optimista amin'ny hetsika ara-batana voalohany any UK
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Oktobra 15, 2021
Nanohy ny fivorian'ny varotra ara-batana alohan'ny nanesorana azy tamin'ny lisitra mena an'ny Fanjakana Mitambatra, nitatitra i Tourism Seychelles fa ireo masoivoho nanatrika ny Travel Gossip Roadshow tany amin'ny tanàna telo UK nanomboka ny 16 septambra hatramin'ny 22 septambra 2021, dia be fanantenana momba ny dia ary ny mpanjifany dia maniry fatratra ny hikaroka lava manintona indray.
Ity no hetsika ara-batana voalohany tany Angletera hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny martsa 2020.
Ny varotra dia no naniry fatratra ny fifandraisana mivantana izay ahafahany mifandray sy manangana fifandraisana indray.
Ny Travel Gossip Roadshow dia mampifandray ireo matihanina amin'ny varotra amin'ireo solontena fitetezana eran'izao tontolo izao.
Ny tanjona dia naseho tao amin'ny Travel Gossip Roadshow izay natao tao Leeds, Brighton, ary Portsmouth avy Seychelles fizahan-tany'Executive marketing any UK, Ramatoa Eloise Vidot, ho an'ity hetsika ara-batana voalohany any amin'ny faritra ity hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny martsa 2020.
"Ny fiverenana eny an-dàlana taorian'ny fivoriana virtoaly sy webinar nandritra ny 18 volana dia fotoana mampientanentana ho anay ary mazoto izahay hitondra ny toerana akaiky ny maso any UK. Indostrian'ny olona tokoa ny fizahantany, ny varotra dia no naniry fatratra ny fifanatrehana mivantana izay ahafahanay mifandray sy manorina fifandraisana indray, "hoy Ramatoa Vidot nitatitra.
Nanampy izy fa amin'ny alàlan'ny hetsika izay mampifandray ireo matihanina amin'ny varotra amin'ireo solontenan'ny toerana itodiana manerana izao tontolo izao, "izahay dia afaka nampandroso an'i Seychelles ho toy ny toerana mahafinaritra, madio, azo antoka ary azo antoka ho an'ireo mpiasan'ny dia lavitra. Zava-dehibe ny famerenantsika ny fahatokisan-tena amin'ny dia sy ny toerana halehantsika. ”
“Ny fandraisana anjara amin'ny hetsika, izay natao ny hariva, dia tena tsara tokoa; Nihaona amina masoivoho miisa 70 farafaharatsiny izay efa nirotsaka sy liana tamin'ny famongorana vaovao sy vaovao farany momba ny toerana haleha aho. Amin'ny ankapobeny, nahita fahalianana be tamin'io toerana io izahay, dodona izy ireo hianatra bebe kokoa ary hanomboka hamidy indray, "hoy Ramatoa Vidot.
Ny hariva dia nanaraka endrika robina boribory, miaraka amina fotoana fohy hanoloran'ireo mpampiranty ny vokatr'izy ireo amina vondron'orinasa kely hanaraka ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina. Teo anelanelan'ny fotoam-pivoriana, ny mpitsidika sy ny mpanentana dia noraisina tamin'ny sakafo hariva nipetraka. Nofaranana tamin'ny fisarihana loka nandrasana ny hetsika.
Naneho hevitra momba ny fandraisan'anjaran'ity toerana ity ny hetsika, Ramatoa Karen Confait, talen'ny fizahantany Seychelles ho an'ny firenena UK & Irlandy ary Nordic dia nilaza fa; “Ny fizotran'ny Travel Gossip Roadshow izay alainay any Royaume-Uni. Na dia mbola tao amin'ny lisitry ny mena any UK aza i Seychelles tamin'izay fotoana izay, dia nahatsapa izahay fa zava-dehibe ny hitazomana ny toerana ho lohalaharana ao an-tsain'ny agents. Ny fahatsapana ankapobeny avy amin'ny agents dia ny fanantenana. Ny mpanjifan'izy ireo dia maniry mafy ny handeha lavitra indray rehefa afaka 18 volana tsy maintsy mijanona eo an-toerana na mandeha lavitra lavitra an'i Eropa. Miala amin'ny fanesorana an'i Seychelles amin'ny lisitra mena izahay dia manantena ny handray ireo mpitsidika UK any amoron-tsiraka indray. ”
4 ora maraina GMT, Alatsinainy 11 Oktobra, ireo mpitsangatsangana avy any Angletera, ny tsena fizahan-tany fizahan-tany lehibe fahatelo an'ny Seychelles, dia mety hitsidika ny nosy nosy Indianina indray miaraka amin'ireo mpandeha afaka mahazo fiantohana amin'ny toerana alehany ary tsy ilaina intsony ny manao vaksiny hanao fanadinana PCR na hitrandrahana karatra amina hotely ekena rehefa tafaverina mody izy ireo.
Toerana tsara indrindra any Etazonia hitsitsiana vola amin'ny fijanonana ao amin'ny hotely...
Ny Repoblika Czech dia mandrara ny olona tsy vita vaksiny amin'ny...
Hihidy tanteraka, tsy maintsy atao vaksiny manerana ny firenena amin'ny...
Tale Jeneralin'ny Sleepout London: Manova ny fiainana ao anatin'ny hatsiaka mangidy
Mampahatsiahy ny mpihinana fofona: Mampidi-doza ny homamiadana